Home » Featured » Calrec dia mandresy lahatra ny New Impulse fototra ao amin'ny NAB Show New York
Ny foibem-pampandrosoana dia fanodikam-peo mahery sy môtô mandeha amin'ny AES67 ary SMPTE Fifandraisana 2110. Miaraka amin'ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny IP, dia mety ho lavitra ny fifindrana ary mifandray amin'ny tambajotra marika mampiasa ny COTS Hardware. Io teknolojia io dia ahafahan'ireo mpanjifan'i Calrec hampiova ny fifindrana amin'ny fitaovana an-tserasera manaraka (NGA) sy IP, ary manome azy ireo fahafahana hanao izany tsy misy famatsiana fitaovana famokarana.
"Ny foibe Impulse dia sehatra DSPA matanjaka sy azo tsapain-tanana izay mampifanaraka ny fampandrosoana an'i Calrec amin'ny ho avy, raha mbola manohy mamolavola sy manome ny mpanjifantsika amin'ny lalam-panitsiana miovaova amin'ny IP rafitra izahay," hoy i Dave Letson, VP Sales of Calrec. "Rehefa lasa mihamitombo ny IP, dia tanjon'i Calrec ny hampihenana ny fandanian'ity tetezamita ity ary mahatonga azy ireo hanana traikefa goavana ho an'ny mpanjifa sy mpanjifa vaovao miezaka hanatsara ny asa farany."
Ny Impulse dia manome toerana malalaka ny lalana 3D ary ny fandrindrana ny programa NGA, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2 ary 7.1.4 dia azo ampiasaina, busses, fanaraha-maso ary famenoana. Izy io dia manana router Ao amin'ny AoIP, izay manohana tanteraka ny fitadiavana sy ny fitantanana ny fifandraisana, ary ny mDNS / Ravenna. Ny valin'ny 5U XNUMXU roa dia azo ampifandraisina mba hanomezana alalana feno ary mety ho lavitra ny fifindran'ny loza.
Ankoatra ny foibe Impulse, Calrec dia hampiseho ny endri-pitenenany R, fampitomboana, IP mifototra amin'ny fandaharana. Ny rafitra fanaraha-maso ara-batan'olona R dia ahitana sehatr'asa telo matevina: tontonana fader, tambin-tseranana lehibe ary tselatra malefaka. Ny core 2U tsotra miaraka amin'ny fitaovana enti-mampiditra entana dia ahafahan'ny mpanjifa miakatra sy mihazakazaka avy hatrany. Ny singa tokana dia afaka mamorona toeram-ponenana tsy miankina telo, tsy misy fizarana ireo loharanom-pifandraisana DSP. Ny fahaizana mampiasa fitaovana fampifangaroana maromaro mifandraika amin'ny fahafahan'ny tambajotran'ny kompania AES67 dia manome fahafaha-ampy hanatsarana ny fepetra haingana amin'ny radio.
Ny fampiroboroboana ny Consolation Brio an'i Calrec miaraka amin'ny fampitomboana ny fahaizan'ny fampitaovana dia hampiseho amin'ny NAB NY ihany koa. Ny fonosam-pamokarana vaovao dia mampitombo ny isan'ireo BIO12 DSP avy amin'ny 48 ka hatramin'ny fantsona 64 ary ny Brio36 avy amin'ny 64 ka hatramin'ny fantsona 96. Azo ampiasaina amin'ny ordinatera Brio amin'ny rindrambaiko v1.1.6 na mihoatra; Ny fampivoarana rindrambaiko dia maimaim-poana taorian'ny fanoratana Brio amin'ny www.calrec.com/brioregistration.
Calrec Audio dia manokana fotsiny amin'ny fahaizana amam-pihetseham-po ho an'ny on-air sy mivantana. Mpanatontosa iraisam-pirenenana mihoatra ny 50 taona, Calrec dia namolavola karazan-dizitaly maromaro niantsoana ireo mpampita vaovao nahomby indrindra manerantany. Mitsaha-mitombo. Ny konsole dia singa manan-danja ao amin'ny tambazotran'ny toeram-piompiana, manamboatra ny fampitahana amin'ny asa, azo ampiasaina ary ny fahafahana mivoatra mora foana. Nanomboka hatrany am-piandohana, Calrec dia namorona vahaolana vaovao izay nahafahan'ny mpandrindra hampivelatra ny fomba fiasan'izy ireo ary hahazo tombony bebe kokoa amin'ny fitaovany. Ho an'ireo laharam-pifanam-peo avo lenta, ireo mpampiely vaovao dia nametraka ny fitokisany tamin'i Calrec. Misy fampahalalana bebe kokoa hita ao calrec.com.
Araho Calrec Audio:
Calrec Gets a Four Chair Turn from Accomplished A1 Mixer onThe Voice, Mike Abbott - Janoary 22, 2019
Network Innovations (NI) Formally Launches Iridium Certus to Global Customers - Janoary 21, 2019
Pliant®Technologies Showcases Latest Updates for CrewCom® Wireless Intercom System at ISE 2019 - Janoary 17, 2019
2015 bitrate fampihenana fampitana injeniera fampitana Engineering Calrec Audio Control System H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC tabataba fampihenana Spears & Arrows UHD / 4K / HD Ultra HD Forum viarte Video injeniera Warsaw	2018-10-11
Previous: Ny namana MTS dia nanendry an'i Justin Paul ho mpitantana ny Marketing Manager
Next: Ny Arvato Systems dia nahazo ny tetikasam-pifaneranana momba ny fifamoivoizana sy zon'ireo RTÉ Ireland